थुक हुन्थेन भने दाँत कुहिन्थ्यो !
हाम्रो मुखबाट निस्काशन हुने र्याल वा थुक विभिन्न प्रकारका रोगहरु पत्ता लगाउन प्रयोग हुने गरेका छन् । रगतको परीक्षण अगाडि नै मानिसमा फोक्सोको क्यान्सर पहिचान गर्न र्यालको प्रयोग गरिएको युनिर्भसिटी अफ क्यालिफोर्नियाले जनाएको छ। एक थोपा थुकबाट ट्युमरको डीएनए पहिचान हुने र यसको परिणाम १० मिनेट भन्दा थोरै समयमा थाहा हुने बताइन...
बिहान उठ्ने वित्तिकै खाली पेटमा एक–डेढ गिलास पानी पिउने । यसले वजन घटाउन मद्दत गर्नुका साथै दिमागमा प्रर्याप्त उर्जा दिन्छ । जसका कारण दिनभर सक्रीय हुन सहयोग मिल्छ । चिया वा कफी खानुभन्दा अगाडि आधा वा एक गिलास पानी पिउनै पर्छ । यसले शरिमा एसिडको असर र वजनलाई नियन्त्रण गर्छ । नास्ता गर्नु भन्दा करिब एक घण्टा अगाडि वा नास्ता गरेको एक...
यस्ता छन् तौल घटाउने २० उपाय
धेरै ब्रेकफास्ट खानुहोस् : आफ्नो दिनको सुरुवात एक सन्तुलित ब्रेकफास्टबाट गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ स्वास्थ्य क्षेत्रमा बारम्बार सुन्न पाइन्छ । बेलायतस्थित इम्पेरिकल कलेज लन्डनले गरेको अध्ययनअनुसार बिहानको ब्रेकफास्ट छाड्ने मानिसको दिमाग उच्च क्यालोरियुक्त खानेकुरातर्फ देखाउँदा बढी उज्यालो देखिएको थियो । यसको अर्थ हो, तपाईंले...
कोलेस्ट्रोल कम गर्ने उपाय
रातो मासुले कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउने भएकोले भोजनमा मासुको प्रयोग कम गर्ने । यदि मासु खानै पर्नेभए छाला भएको मासु खाने । विफ, पोर्क र भेडाको मासु खान छाडेको राम्रो । दैनिक भोजनमा ५ देखि १० ग्राम फाइबर समावेश गर्नुपर्छ । यसले कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउँछ। कोलेस्ट्रोलको खतराबाट बच्नका लागि नियमित रुपमा परीक्षण जरुरीछ । परीक्षणले...
कसरी जवान भइराख्ने ? विज्ञको कुरा सुन्ने कि
-रबर्ट प्रिट (हेल्थडे रिपोर्टर) के नियमित कडा व्यायाम जवानीको अमृतसुधा हुन सक्छ? एउटा नयाँ अध्ययनले यस्तै देखाएको छ, कम्तिमा हाम्रो शरीरका कोषहरुको सम्बन्धमा । अमेरिकी राज्य युटाको ब्रिगम योङ विश्वविद्यालयका व्यायाम विज्ञानका प्रोफेसर ल्यारी टकर भन्छन्, ‘तपाईं ४० वर्ष हुनुको अर्थ जैविक रुपमा पनि तपाईं ४० वर्ष बुढो हुनु भयो भन्ने...